खोलौं बैंक खाता अभियानलाई एनएमबीको साथ | गृहपृष्ठ
Home बजार खोलौं बैंक खाता अभियानलाई एनएमबीको साथ
खोलौं बैंक खाता अभियानलाई एनएमबीको साथ
‘एनएमबी सबैको : सहारा बचत खाता’ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले ‘एनएमबी सबैको : सहारा बचत खाता’ खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको ‘खोलौं बैंक खाता अभियान २०७६’ लाई लक्षित गर्दै उक्त बैंकले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
बैंकले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो योजनाबाट खाता नभएकाहरूका लागि शून्य रुपैयाँमा खाता खोली दिने भएको छ । उक्त खातामा बैंकले नै रू. १ सय जम्मा गरिदिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले जानकारी दिएका छन् ।
यो खाता खोल्ने ग्राहकको अग्रिम बीमा सुरक्षण गरिने भएको छ । सो बीमाले ग्राहकको दुर्घटना मृत्यु भएमा, दुर्घटनाबाट स्थायी रूपमा अंगभंग भएमा, क्यान्सर, किड्नी निष्क्रियता, लिभरको रोग, मस्तिस्कघात, हृदयघात, प्यारालाइसिस जस्ता १८ ओटा गम्भीर रोग लागेमा स्वयम् ग्राहक अथवा हकवालालाई रू. १० लाखसम्मको बीमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।
साथै, उक्त खातामा ६ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको सुविधा रहेको छ । सो खाता खोल्ने ग्राहकलाई निःशुल्क डिम्याट खाता, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा डिलाइट एटीएम कार्डको व्यवस्था रहेको छ ।
नेदरल्यान्स्को एफएमओ र मलेसियाको योङ लियानको विदेशी संयुक्त लगानी रहेको यस बैंकले सन् २०१७ र २०१८ मा लगातार उत्कृष्ट बैंकिङ अवार्ड विजेता हुन सफल भएको छ । २४ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस बैंकको हालसम्म १ सय १० शाखा, ४ एक्स्टेन्शन काउन्टर, ९९ एटीएम रहेका छन् ।